Ny Herinandro Tao Amin’ny Bilaogy Boliviana – Fony Tafakatra Mondialy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Aogositra 2017 3:28 GMT
(Fanamarihana: efa tamin'ny volana Mey 2006 no nivoaka ny lahatsoratra amin'ny teny Anglisy)
Efa ela ireo Boliviana no nanaiky tsy fidiny ny zavamisy fa ho ao an-tanindrazana ihany koa ny ekipam-pirenena baolina kitra hijery ny Amboara Manerantany manaraka amin'ny fahitalavitra. Tamin'ny lalao fahatelo mivantana, tsy nahavita nandresy tamin'ny fanatanjahantena lehibe indrindra manerantany i Bolivia ary namela ity firenena bitika ity hilaza hoe “angamba amin'ny taona 2010″. Mitsingerina isaky ny efa-taona izany fotoana izany, satria mipoitra mahazatra amin'ny fiadiana ny Amboara Manerantany ny telo amin'ireo mpifanolo-bodirindriina aminy. Tsy fotoan-tsarotra foana anefa no misy. Tamin'ny taona 1994, sambany voafantina tamin'ny Amboara Manerantany tsy manam-paharoa ny ekipa maitso sy fotsy, izay notontosaina tao Etazonia. Na dia nahavita nampiditra baolina tokana monja aza ny ekipa, manasokajy izany taona izany toy ny zavatra majika ny Boliviana.
Nanararaotra nitodika tamin'ireo andro ireo ny bilaogera. Rolando Lopez, manoratra ao amin'ny bilaoginy Rocko Weblog [ES], nilaza ny zava-bitan'ny ekipa izay nandrava ny fizarana ara-poko sy ara-paritra ary nampitambatra ny firenena manontolo. Tamin'ny lalao voalohany nandraisan'izy ireo anjara, nifanandrina tamin'ireo matanjaka sady tompondaka, Alemaina ao amin'ny Soldier Field tao Chicago izy ireo ary liana fatratra ny firenena iray manontolo.
… ao amin'ny firenena kely lavidavitra, tamin'ny 3:30 hariva tamin'ny 17 Jiona 1994, foana ny arabe sy ny firenena iray manontolo, mbola tsy mino toy izany aho fa nampiasaina izany fehezan-teny izany, niraikitra tamin'ny fahitalavitra avokoa ny maso rehetra ary mihaino radio mivantana avy any Chicago ny sofina liana te-hahafantatra”
Resy tamin'ny isa 0-1 ihany i Bolivia tamin'izany lalao izany ary nahazo karatra mena ny mpanafika, Marco Antonio “El Diablo” Etcheverry ka voaraoka tsy nahazo nilalao. Nampahatsiahy ny teny avy amin'ilay mpanoratra Orogoaiana, Eduardo Galeano i Lopez, izay niteny hoe: “Ho an'ny ekipam-pirenena Boliviana, toy ny fiantsonana ao amin'ny volana ny fahatafitàna nandray anjara tamin'ny Fiadiana ny Amboara Manerantany taona 1994.” Na dia efa ela loatra aza ireo fahatsiarovana ireo, manantena i Lopez fa fandrisihana tsara hiezahana hahatratra izany faratampony izany indray ny fahatsiarovana mahafinaritra.
Ny lalana mankany amin'ny fahazoana mandray anjara dia mandalo amin'ny goavana, Brezila, izay nanohy hatrany ny dia handresy tamin'ny Fiadiana ny Amboara Eran-tany tamin'io taona io. Na dia izany aza, nandritra ny dingana fifanintsanana, nahavita nampiditra baolina iray teo anoloan'ny Breziliana tao amin'ny kianjan'izy ireo tao La Paz i Bolivia. Tamin'ny Alarobia vao maraina tamin'ny 4, nandre ny famerenana izany lalao izany tao amin'ny onjam-peo ao an-toerana i Javier Rodriguez. Nanasongadina ilay antsoin'i Rodriguez fa “tifitra mifono zava-miafina” avy amin'i Etcheverry ny lalao, izay nankao ao amin'ny tongotr'ilay Breziliana mpiandry harato ny baolina. Nahavita nandrakitra ny fiantson'ilay mpanolotra fandaharana izany tifitra izany izy, izay mbola mampangitaka 13 taona tatỳ aoriana ary nametraka ny mp3 tao amin'ny bilaoginy Oirlo hasta Enmudecer [ES] izy mba ahafahan'ny rehetra miaina indray izany ampahany lehibe izany teo amin'ny tantara Boliviana.